Umaka: ukufaka uphawu lwe-imeyili | Martech Zone
Umaka: ukufaka uphawu lwe-imeyili
NgoMsombuluko, Disemba 28, 2020 Lwesibili, Disemba 29, 2020 Douglas Karr
Izinkampani eziningi ezithumela i-imeyili azibukeli phansi ukuthi ukulethwa okungakanani kungayithinta kanjani inhlangano yazo. I-imeyili enhle, eyakhiwe kahle, futhi esebenza kahle kakhulu ingavuleka kufolda engenamsoco yomuntu obhalisile futhi ofisa ukuguqula nenkampani yakho. Leso yisimo esibi okufanele ubhekane naso. Okubi kakhulu, ungahle ungaboni nokuthi ama-imeyili akho adluliswa aya kudoti ngaphandle uma usebenzisa ithuluzi lokuqapha ibhokisi lokungenayo. Isincomo sami salokhu ngabalingani bethu ku